Global Voices teny Malagasy » Mitondra Ny Kolontsaina Japoney Momba Ny Hatsikana Ho An’Ireo Mpihaino Amin’ny Fiteny Anglisy i Katsura Sunshine · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 08 Oktobra 2017 9:17 GMT 1	 · Mpanoratra Nevin Thompson Nandika Sylvia Aimée
Sokajy: Azia Atsinanana, Japana, Fiteny, Hehy, Mediam-bahoaka, Zavakanto & Kolontsaina
Katsura Sunshine (桂 三輝 Katsura Sanshain). Pikantsary avy amin'ny lahatsarin'ny YouTube  an'ny NikkeiTV.
Kanadiana iray mpanao hatsikana sy mpilalao tantara tsangana no nahita fahombiazana tamin'ny nitondrany ny iray tamin'ireo endrika fialamboly mahazatra tena malaza indrindra tao Japana, ka ny hampiditra azy io eran'izao tontolo izao no tanjona.
Voafehin'i Katsura “Sunshine” (桂 三輝, Katsura Sanshain) ny rakugo, “kolontsaina fitantaràna hatsikana Japoney” . Izy irery no hany tokana matihanina amin'ny rakugo, nefa tsy Japoney voafidy ofisialy eran'izao tontolo izao ary nahazo ny ampahany voalohany tamin'ny anarany avy amin'i Katsura Bunshi VI , ilay “mpampianatra” izay nampianatra azy ilay zavakanto.
Ny ampahany faharoa amin'ny anarany eny an-tsehatra 三輝, na “Sanshain”, ihany koa dia anisan'ny manondro ny fiaviany sady koa natao ho kilalaon-teny hifanaraka amin'ny toetrany mamirapiratra sy ireo volony vonivony mavamavana.
Araka ny maha-kolontsaina fanehoana an-tsehatra azy, ny rakugo dia manana toetra tsotra mamitaka. Araka ny voalazan'i Katsura Sunshine :
Seho an-tsehatra iray nanakely zavatra, manome lanja mpisehatra tokana iray mitafy kimono ny Rakugo, mandohalika eo ambony ondana kely, izay, amin'ny alalan'ny fampiasana fikopakopahana iray sy lamba famaohana tànana fotsiny ho fitaovana fanatontosanany seho, mampiala voly ny mpihaino amin'ny alalan'ny hatsikana miteny irery arahan'ny tantara iray nentim-paharazana.
Raha toa amin'ny fiteny japoney no ilalaovan'i Katsurua Sunshine, nanao ezaka ihany koa izy handika izany amin'ny fiteny Anglisy. Ity no santionany mikasika ny rakugo, izay andrasarasan'i Katsura Sunshine ny fahasarotan'ny “fiteny maoty” japoney, miaraka amin'ireo vokany maha-sanganehana:
Avy any Toronto, Kanadà, Katsura (avy eo nomena anarana hoe Gregory Robic) tonga tao Japana voalohany tamin'ny taona 1999, nikasa ny hijanona tao nandritra ny enimbolana monja . Sivy taona no lasa fa mbola tafajanona tao Japana ihany izy, ary nanapaka hevitra ny hiofana ho mpilalao rakugo. Tao anatin'ny taona vitsivitsy, nanao fampisehoana teny andalam-be i Katsura Sunshine, nisehatra teo anatrehan'ireo mpihaino manerantany.
Ohatra iray tamin'ireo fampisehoana nataony ity:
Teo amin'io sehatra io ihany, miresaka ny tantaran'i Jugemu (寿限無 ) i Katsura Sunshine, tantara japoney iray malaza sady iray amin'ireo tena sangany indrindra amin'ireo tantara amin'ny rakugo, ary teny iray izay tsy maintsy tadidian'ireo mpianatra Japoney tsirairay any amin'ny sekoly ambaratonga fototra:
Amin'izao fotoana izao, monina ao Ise i Katsura Sunshine, tanàna kely iray any ambanivohitr'i Japana. Tsy tapaka manao fampisehoana manerana izao tontolo izao izy, ary mikasa ny hanokatra fampisehoana iray ‘off-Broadway’ natokana ho an'ny rakugo.
Ireo fampisehoana Rakugo ataon'i Katsura Sunshine dia azo jerena ao amin'ny fantsony ao amin'ny YouTube , ary eo amin'ny Timeline  , tranonkala Japoney mifantoka amin'ireo vaovao, teknolojia ary fialamboly.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/10/08/107794/
 Pikantsary avy amin'ny lahatsarin'ny YouTube: https://youtu.be/2SamHpK6dew
 “kolontsaina fitantaràna hatsikana Japoney”: http://www.nippon.com/en/features/jg00045/
 Araka ny voalazan'i Katsura Sunshine: https://sunshineinenglish.wordpress.com/what-is-rakugo/
 tao nandritra ny enimbolana monja: https://www.japantimes.co.jp/culture/2014/10/15/stage/katsura-sunshines-star-english/#.WciMVsh95hE
 fantsony ao amin'ny YouTube: https://www.youtube.com/user/KatsuraSunshine/videos